Vaovao Archives - FJKM Québec - Canada
Posts tagged with ‘Vaovao’
Sortie Sekoly Alahady – 8 febroary 2020
12 février 2020 by Bako Raveloson
Hits: 411Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao ! Hafaliana foana ny anay ankizy
Sampana Sekoly Alahady : Glissade 2020
Hits: 440Ny Sampana Sekoly Alahady dia manasa antsika hiaraka hilalao aminy etsy @ Centre de plein air de Lévis. Ny Sampana no hiantsoka ny fidiran’ny ankizy manao glissade. Ireo ray aman-dreny kosa dia miantoka ny fidirany. Ho an’ireo izay te hanao ski dia afaka manao izany izy : 10 $ no vidim-pidirana (hors location de […]
Soirée de louange avec Joseph D’Af
Soirée de louange et d’adoration avec Joseph D’Af qui nous arrive directement de Madagascar. Il nous partagera sa passion pour Jésus Christ et nous entraînera avec ses chansons rythmées et empreintes de sagesse.
Qui est Joseph D’Af?
9 décembre 2019 by Bako Raveloson
Hits: 734De son vrai nom Rakotoson Josefa, « Joseph D’Af » (comme D’Afrique) est un jeune chanteur chrétien de Madagascar. Joseph D’Af est un adorateur de Dieu. Il est apprécié pour son audace, son innovation et son style de musique contemporain. Il est respecté pour sa passion pour le Christ et ses messages qui interpellent les jeunes […]
Isankeritaona – FJKM Canada
Fihaonan’ny fiangonana FJKM eto Canada.
Culte en français – FJKM Québec
Hits: 344Comme tous les 5èmes dimanches du mois, et pour le bénéfice de nos enfants, le culte de la FJKM Québec sera en français ! Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.(Mat. 9 : 14)
Fankalazana ny herinandron’ny FM andro 2
Hits: 280« HERINANDRON’NY FANAHY MASINA » FANOMPOAM-PIVAVAHANA SY FAMPIANARAM-PINOANA ZOMA 07 JONA 2019, amin’ny 7 ora hariva. Fampianarana « Ny asan’ny Fanahy Masina sy ny fahotantsika » Hisy ny « Asa sy Fampaherezana » hamaranana ny fotoana
Fankalazana ny herinandron’ny FM andro 1
Hits: 314« HERINANDRON’NY FANAHY MASINA » FANOMPOAM-PIVAVAHANA SY FAMPIANARAM-PINOANA ALAROBIA 05 JONA 2019, amin’ny 7 ora hariva. Fampianarana « Ny asan’ny Fanahy Masina sy ny valim-bavaka omen’ny Tompo antsika »
Fiarahabana Paska 2019
20 avril 2019 by Bako Raveloson
Hits: 428Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao PASKA 2019 izao. “Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” I Kor. 5: 7.
Hisy ny Asa sy Fampaherezana